Kudzidzisa Show Masters Magic
The New Mental Coaching Ratidza naWaler Rolfo
Inotungamirirwa naAlessandro Marrazzo
Tiri kurarama mudutu rakakwana: zvinotarisirwa kuti kuchinja kwatichararama kubva pano kusvika ku2030 kuchave kukura uye kuoneka pachena kune avo vanoona yekutanga kugadzirwa kwemaindasitiri kusvikira nhasi. I80% yezvatinodzidza nhasi ichave yakwegura mugore nehafu.
Muchiitiko ichi Walter Rolfo anotitungamirira kuburikidza ne "Shanduko isimba", mune rwendo rwekunzwa uye rwekuita mune ramangwana uye mukuchinja!
Kuchinja simba, sezvichava simba.
Kuchinja kunopa simba.
Kuchinja masimba emashiripiti anoita kuti ramangwana ive nzvimbo yakanaka yekukunda.
Mune maminitsi e100 eCoaching anoratidza, tichadzidza kudzidza kuchinja, tichiona semukana usingagoni kuregererwa. ... kuziva kuti tiri mapofu mukati megoridhe.
CNH - Shanduko is Power
Pinda mukati kuti uone iyo Gallery
Mental Coaching Ratidza naWaler Rolfo
Chii chinoita kuti "unyanzvi hwekuziva zvisingaiti" humwe, mweya waro unyanzvi, hunoshamisa kwazvo, hunoita kuti huratidze kunyange zvakanyanya zviri mukati, zvichiita kuti zvifadze kune marudzi ose evateereri.